Amnigu Qoriga Ka Qara Weyn – Qalinkii: Yuusuf-garaad Cumar. |
Amnigu Qoriga Ka Qara Weyn – Qalinkii: Yuusuf-garaad Cumar.
Waddada aan ku soconnaa waa mid jajaban. Marmar ayaad saqafkaama meel kale oo aadan dooneyn madaxa ama garabka ku dhufaneysaa.
Nin u dhashay dal Yurub ah oo i garab fadhiya ayaa intaa su’aalo i weydiinaya aan u qaatay in uu cabsida isku moogeeysiinayo. Laakiin anigu sheeko diyaar uma ahi. Jawaabaha qaar aan siinayo waa kuwo u dhigma in aan leeyahay saaxiib hadalka iga daa.
Markii dambe ayuu i weydiiyay su’aal iga yaabisay – Maxaad waddooyinka isaga dhisi weydeen?
Su’aashani ma ahan mid aan filayay. Waan garan waayay wax aan ka iraa iyo meel aan jawaabta uga billaabo.
Ma aqaan sababta laakiin mar kasta hadalkii ninkaas, oo habeenkaas macna darrada iigu muuqday, wuu igu soo maaxdaa. Ma ahan in aan ka hadlayo waddada oo keliya, laakiin amni waa mid aad uga ballaaran dagaal. Askariga iyo qorigiisu aad ayay muhiim ugu yihiin amniga. Laakiin keligood howsha kuma filna.
Gaar ahaan marka laga hadlayo arrimaha Soomaaliya oo inta badan cakirnaa tan iyo berigaas. Kuwaas oo muwaaddin Soomaali ah ka sokow, ay inta badan shaqadeydu ahayd la socodkooda, baaritaankooda, falanqeyntooda iyo odorskooda.
Dalkeenna mowduucii aad ka hadal maagto in uu waxqabad u baahan yahay ha ahaado fursad u abuurista shaqo ee dhallinyarada, xaqdhowrka xuquuqda aadanaha oo maxaabbiistu ay ku jirto, kobcinta dhaqaalaha, xeer u dejinta saxaafadda, ganacsiga iyo waxbarashada, horumarinta fanka, dhaqanka iyo Sportiga, iyo dhismaha waddooyinka waxaad arkeysaa dad waxaas u arka faakiheysi iyo qof kibray hadalkiis.
Waxay soo hadal qaadayaan arrimo kale oo wax ka qabasho deg deg ah u baahan. Amniga, tahriibka, qaxootiga, barakaca iyo arrimo kale oo xasaasi ah.
Waxaa naga maqan in aan dadka oo dhami isku hal dhinac culeyska saari doonin isla markaana aanuu isku xirfad iyo aqoon ahayn wakhtiguna aanuu na sugeyn. Markaa ay habboon tahay in howluhu ay isku dhinac socdaan.
Aragtideyda, tayaynta iyo baahinta waxbarashada, shaqaaleynta dhallinyarada, daryeelka caafimaadka, dhowridda xuquuqda aadanaha, sarreynta sharciga, kobcinta dhaqaalaha, tababbarka suxufiyiinta, la xisaabtanka siaasiyiinta iyo ganacsatada, xakameynta laaluushka iyo musuqmaasuqa, horumarinta fanka iyo Sportiga intuba waxaa ay qeyb ka yihiin sugidda amniga iyo ilaalinta nabadgelyada iyo xasilloonida waarta wakhtiga dheer.
Arrinta ay tahay in degdeg wax looga qabto sida is hortaagidda weerar argaggixiso iyo gurmadka abaaurhu ma ahan in ay sabab u noqdaan in la baajiyo ama ay dib u dhacaan wax ka qabashada arrimaha kale ee muhiimka ee wax ka qabadka u baahan ase aan deg deg ahayn.
Waa in ay suurta gashaa in kuwa gurmadka iyo deg degga ah inta ay dad ka shaqeynayaan in dad kalena ay ku howlan yihiin kuwa aan deg degga ahayn laakiin muhiimka ah.
Waa habeen. Waa Hargeysa. Waa bilihii ugu dambeeyay sannadka 1990. Annaga oo dhowr ah oo howl samafal u soconna ayaan wadannaa gaari 4×4.
Mugdiga iyo burburka waddada waxaa uga sii daray roob da’ay oo xareeddiisu ay dhulka jiifto. Godadka laamiga ka dhex qodan xareedda ayaa buuxisay oo la sintay waddada inteeda kale.